Jwxo – shiil oo Gubay Gaadhigii Gurmadka Caafimaadka ee Hay’adda OWDA, Afduubayna Samafale Cabdiwaxid – Rasaasa News
Jwxo – shiil oo Gubay Gaadhigii Gurmadka Caafimaadka ee Hay’adda OWDA, Afduubayna Samafale Cabdiwaxid
Sep 6, 2009 Jwxo-shiil
In badan oo badan baan ka dignay, dambiile Jwxo-shiil waxa uu wado in ayna wali u cadayn dadweynaha Somalida Ogadeeniya, goorma ayeyse u cadaan doontaa, waa kol ay xeedho iyo fandhaal kala dhacaan, oo ay rogmadaan badi dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxay dadweynaha Somalida Ogadeeniya aad uga yaabanaayeen ujeedada qarsoon ee uu Jwxo-shiil u laynayo N/hurayaalka dagaalka kula jira ciidamada gumaysiga Itobiya, waxaa kale oo aad loola yaabanaa laynta N/hurayaalka JXSG ee caabinay ciidamada codowga gumaysiga Itobiya.
Waxaa kale oo lala fajacsanaa arimaha wareersan ee ku saabsan dagaalada aan jid iyo jaha toona lahayn ee uu ka riday gabalada Jubooyinka Somaliya, halkaas oo ay ku dhinteen dhalin yaro reer Ogadeeniya ah oo aan wali la garanaynin sabab ay u dhinteen.
Waxaas oo dhan waxaa ka dambi badan kana foolxumo badan, marka uu Jwxo-shiil gubayo gaadiidka gurmadka caafimaadka ee ka hawl gala dhulka Somalida Ogadeeniya ee ay waliba lee yihiin hayyaddaha Samafalka. Laba maalmood ka hore ayey ahayd kolkii Jwxo-shiil uu gubay hal xabo oo gaadiidka gurmadka caafimaadka ah oo lahayd Hayyada Samafalka ee the Ogaden walfare and development Association [OWDA],Tuulada Xeedh oo ka tirsan degmada Dhanaan xili ay ku jirtay hawlo ay kaga soo uruurinayso tuulooyin ku xeeran degmada Dhanaan. Hayyada ayaa haysatay xabada Ambalaska ah ee uu gubay khaatumo laawe Jwxo-shiil, bishan Ramadaan dhaxdeeda, gaadhigan ayaa waxaa Hayyada cawiimo ahaan u siisay Hayad carbeed oo samafal ah, waxayna bad baadin jirtay haweenka uurka leh, caruurta ay nafaqo xumadu haysato iyo guud ahaan bukaanka aan ciirsiga lahayn ee reer Ogadeeniya.
2007 ayey ahayd kolkii gaadhi kan la mid ah uu gubay Jwxo-shiil, halkaas oo uu ku dhintay aas aasihii hayyada OWDA Sulub, hada waxaa Jwxo-shiil u afduuban samafale Cabdiwaaxid Sheekh Axmed oo ahaa masuulki la socday gaadhiga iyo wiil kale oo aanaan wali magaciisa helin.
Waxaa, kol hore looga digay dadweynaha Somalida Ogadeeniya in ayna soo dhaweynin Jwxo-shiil iyo dabdhigeyaalka daba socda oo quus ka taagan soo dhex galaka dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waana balan kol ay noqotaba in uu dadweynaha Somalida Ogadeeniya ka abaal marin doono dhibaatooyinka ay gaysteen, waxayna dadweynaha Somlida Ogadeeniya la sugayaan meel ay ku wax yeelayn karaan dambiileyaalkan.
Dambiileyaalkan ayaa waxay dabada la galeen xukuumada Eritariya oo ay iyada guul u tahay gaadhiga Ambalaaska ah ee laga gubo dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waayo umma kala sokeeyaan Eritariya gaadhiga Addis Ababa lagu gubo iyo midka Godey lagu gubo, laakiin ninba maalkiis u macaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxaa dhibaatadiisu ay taaban gaadhiga lagu gubo Godey.
Ma aha oo kaliya dambiyada uu Jwxo-shiil ka galayo ummada Somalida Ogadeeniya kuwo xad leh, waliba waa kuwo si toos ah u taabanaya nolosha dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Dambigan ugu dambeeyey, waxaanu ku dari xisaabta dambiyada uu Jwxo-shiil ka galay ummada Somalida Ogadeeniya ee nooc walba, isaga iyo inta la socotaba, wana dhab in maalin la soo taagi maxkamad, hadiiba inta ka horeysa ayna haleelin gacan cadhaysan oo ka timid ummada Somalida Ogadeeniya.
Ururka ONLF oo Ay Nahdii Ururnimo ka Dhamaatay Waajibna Tahay in Xubnihiisa Macaan Jecesha ah Laga Masaafuriyo Dalalka Reer Galbeedka
Jxsg oo War Saxaafadeed ka Soo Saartay Dagaaladii Ugu Dambeeyey